Kaffaaloo Tafarraa hiikameera. Ati qaama si hir’isanis eenyummaa fi sammuun kee warra qaama si hir’ise fagoo caala ! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKaffaaloo Tafarraa hiikameera. Ati qaama si hir’isanis eenyummaa fi sammuun kee warra qaama si hir’ise fagoo caala !
Kaffaaloo Tafarraa hiikameera. Ati qaama si hir’isanis eenyummaa fi sammuun kee warra qaama si hir’ise fagoo caala !
Oromiyaa Dhihaa Magaalaan Beegii harka Ummataa jirti.
Leenca Sabaa…Miillakee Lamman sabakeef jecha diinaan dhabdus, sabakee keessaatti qalama hinbanneen barreeffamtee jiraatta. Baga utuu lubbuun jirtuu ija sabakee argite.
“Hidhamtooti Oromoo amma mana hidhaatii bahaa jiran waggaa 12-17 hidhaa kan turani dha. Baayeen isaanii ijollolee Qotee bulaa wan ta’aniif maatii waliin quba wal hin qaban. Ijooleen kun gara maatii isaanitti gageefamuu qabu. Gara Balee, Arsii, Harargee, Walloofi wallaga kan deeman ni baayatu. Gootota ilmaan sabaa ta’an kanaaf maalaqa geejibaa,Bakka Bultiifi nyaataaf kan oolu walitti qabuuf HEREGA Baankii karaa Miseensa Koree Rawaachiftuu #KFO ob. OLBAANAA LEELLISAAN banamee jira. Warri gargaruu barabadan:
Maqaa Akkawontii: Olbaana Leellisaa
Bankii: Oromia International bank, Damee Gulallee
WHidhamtooti Oromoo amma mana hidhaatti bahaa jiran waggaa 12-17 hidhaa kan turani dha.Baayeen isaani ijollolee Qotee bulaa wan ta’aniif maatii waliin quba wal hin qaban. Ijooleen kun gara maatii isaanitti gageefamuu qabu. Gara Balee, Arsii, Harargee, Walloofi wallaga kan deeman ni baayatu. Gootota ilmaan sabaa ta’an kanaaf maalaqa geejibaa,Bakka Bultiifi nyaataaf kan oolu walitti qabuuf HEREGA Baankii karaa Miseensa Koree Rawaachiftuu ”
Shororkeessan warra nama nagaatti maqaa mogaase mana hidhaatti nama dararuu fi lubbuu qulqulloota baleessadhiigas dhangalaasa ture mootumma wayyaaneti.namoota 304 dhiifama goodhameef osoon mootumaatu dhiifama gaafachuu qaba ture.
Qeerroo fi Qarreen Jimmaa “Tokkummaan Bilisummaaf jecha oolan!”